Warshad jumlo oo tayo sare leh 80 tiriya tiro badan Nadiifinta dusha nadiifinta bakteeriyada Alaab-qeybiye iyo Soo-saare | Kafiican
Lambarka Moodalka: QMSJ-335
Maaddooyinka firfircoon: Khamriga 75%, Nofeembar-xidhka, Ro-water
Cabir: 13 * 17cm
Cadad halkii awood: 100 tiriyaa
Masaxda jeermiska disha jeermiska ee la tuuro waa mid aan ku habooneyn in la isticmaalo marka aysan sahlaneyn in lagu nadiifiyo biyo marka aad baxeyso, waana la isticmaali karaa. Waxyaabaha dareeraha ah ee masaxyada qoyan ee caadiga ah guud ahaan waa la nadiifiyey ama la sifeeyey biyo, jeermis dileyaal, iyo udgoon, kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu nadiifiyo maqaarka. Masaxaadda jeermiska disha aalkolada ayaa sidoo kale door door ah ka qaadan kara jeermiska iyo jeermiska jeermiska inta la nadiifinayo maqaarka Waxay sidoo kale nadiifin kartaa oo joojin kartaa bakteeriyada inta lagu jiro nadiifinta, taas oo leh saameyn wanaagsan oo nadiif ah oo ku habboon in la qaado. Masaxa midigta kujira waa masaxaad khamri ka kooban 75% aalkolo oo si firfircoon u nadiifin karta.
Waxaan aakhirkii helnay masaxaaddan khamriga ka dib R&D iyo baaritaanno badan. Isugeynta sare ee aalkoladu waxay runtii ciyaari doontaa doorka jeermiska. Masaxaadda alkooladani waxay leedahay aalkolo badan.
Naqshadeynta fudud ee quruxda badan waxay ka dhigeysaa mid caan ah. Daboolka daboolan wuxuu si wax ku ool ah u xakameyn karaa sunta khamriga.
Waagii hore, masaxaada qoyan waxaa laga yaabaa inaysan sahlaneyn in la jeexo marka aad isticmaaleyso. Masaxa qoyan ayaa lagu hagaajiyay arintan. Waxaan hagaajinay cufnaanta jarista mashiinka si aad si fudud uga goyn karto masaxaada.
Tirtiritaankani wuu ka sii dhumuc weyn yahay inta badan suuqa. Dharka jilicsan ee aan dharka lahayn ayaa aad u jilicsan maqaarka.
75% masaxa aalkolada. Jeermiska waxtarka leh. Wuxuu dili karaa 99.9% bakteeriyada. Ka dib baaritaanka maqaarka, waxyeello uma laha maqaarka waxaana loo isticmaali karaa si isdaba joog ah. Ha cunin, wax liq. Badal uma ahan sahayda caafimaadka.
Waxaan leenahay sannado badan oo khibrad ah soo-saarka iyo iibinta warshadaha masaxa qoyan.
Waxaan haynaa xog-ururin ballaaran oo wax soo saar, habeyn shaqo oo la hagaajiyay iyo nidaam xakameyn tayo leh oo adag.
Waxaan haynaa noocyo badan oo tirtiro qoyan, sida tirtirida jeermiska jirka ee aan caadiga ahayn, masaxyada masaxda caruurta, masaxa caruurta, masaxa xayawaanka, masaxa baabuurta, mashiinka jikada, masaxyada jirka, masaxida qalalan, iwm.
Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan. Waxaan noqon doonaa kuu fiican OEM iyo ODM. Wadarta soo saarkeena ayaa ka badan 80,000,000 gogo '.
Waxaan leenahay rukhsad soo dejin iyo dhoofin. Waxaa damaanad qaaday xuquuqda dhoofinta badeecadeena. Alaabtayadu waxay dhaafeen CE, FDA, MSDS iyo diiwaangelin kale oo shahaadooyin ah. Haddii aad leedahay shuruudo kale oo shahaado, waxaan aad u diyaar u nahay inaan kula xaajoono si aan u dhammaystirno.
Xirmo furan. Jiid tirtir. Xidh xirmo si aad uhesho qoyaanka
gacmaha si fiican ugu qoyan sheyga
U oggolow inaad qalajiso adigoon biyo raacinin
ku kaydi inta u dhexeysa 15-30C (59-86F)
Ka fogow barafowga iyo kuleylka xad dhaafka ah 40C (104F)
Hore: 75% Nadiifiyaha Gacanta ee Nadiifinta Khamriga Gacantiisa
Xiga: Soosaaraha ODM Shiinaha Sunta jeermiska Nadiifinta Nadiifinta Nooca Alkolada
masaxa nadiifinta ku saleysan aalkolada
masaxaadda gacanta ee aalkolada
masaxda gacanta alkolada
masaxa aalkolada aalkolada
masaxa aalkolada nadiifka ah
Si wax ku ool ah ayuu u yareeyaa bakteeriyada 75% Alihol disi ...
Warshad OEM 80 masaxa bacda nadiifinta iskucelqaanka ...
Nooca la beddeli karo ee 160 tirtiro halkii qasacad 75% a ...
Warshad OEM awood weyn 750 tirisa multipurp ...